रेडबुल पिउनुहुन्छ ? हेर्नुहोस यसरी गोरुको विर्यबाट बनाईन्छ रेडबुल ( भिडियो ) – mero sathi tv
On ५ मंसिर २०७४, मंगलवार १४:०१
रेडबुल पिउनुहुन्छ ? होसियार ! तपाईं गोरुको वीर्य पिउँदै हुनुहुन्छबजारमा पाइने इनर्जी ड्रिंक भनिएको एउटा पेय पदार्थ । तर डेनमार्क र फ्रान्समा ब्याण्ड भएको यो पेय पदार्थ नेपालमा भने खुलेआम विक्री भइरहेको छ । अझ अचम्मलाग्दो कुरा त के हो भने रेडबुलमा गोरुको विर्य समेत मिसाइने गरेको तथ्य केहि अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले प्रकाशित प्रशारित गरेका छन् ।
प्रकाशले धर्ती छाडेपछि बल्ल लाजिम्पाटमा बास पाइन् प्रचण्डकी जेठी बुहारी सिर्जनाले